Sports | Page 8 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Wed 11 Jul 2018 - 10:41
ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပနေတာ အခုဆိုရင် ချန်ပီယံဆုအတွက် အဖြေထွက်ဖို့လက်တစ် ကမ်းအလိုထိနီးစပ်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ဘာကိုမှ ကြိုတင် ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ ဘောလုံးအားကစားရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ကြိုတင်ရေပန်းစားတဲ့ အသင်းကောင်းတချို့ စောစောစီးစီးထွက်ခွာခဲ့ရသလို မျှော်လင့် မထားတဲ့အလယ်အလတ်အသင်း တချို့ကလည်း ပုံစံကောင်းတွေ ပြသခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြီး တော့ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ ကြီးတွေမှာ ကြုံရလေ့ရှိတဲ့အတိုင်း လူငယ်ကစားသမားကောင်းတချို့ ကလည်း သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ် သွေးတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသလာ တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါး မှာတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့အတူ တောက်ပခဲ့တဲ့ အသက် (၂၃) နှစ်အောက် ကစားသမားငါးဦးကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်လာပြန်သည့် အမေရိကန်-မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေး
Wed 11 Jul 2018 - 10:39
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍတွင် သမိုင်းသစ်ဖွင့် လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဟု အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့် ကြွေးကြော်ခဲ့သည်မှာ တစ်လပင် မပြည့်သေးချေ။ ယခု တော့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွင် တစ်ကျော့ပြန် တင်းမာမှုများ၊ ရန် လိုမှုများကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ မြင်လာရပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုကိစ္စသည် အလွယ်တကူ ကြို တင်မှန်းဆနိုင်သည့် အရာဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။
ပုံနှိပ်မီဒီယာများ နေ၀င်ခဲ့လျှင်. . .
Wed 11 Jul 2018 - 10:34
နှစ်ပေါင်း ၂၀ အထိ အခိုင်အမာ ရပ်တည်ခဲ့သော ပုံနှိပ်မီဒီယာများ လက်ပြနှုတ်ဆက်သွားခြင်းသည် စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သလဲ။
ဗိုလ်လုပွဲတက်ရန် အခွင့်အရေးဆတူရှိဟု ခရိုအေးရှားတိုက်စစ်မှူး မန်ဇူကစ်ပြော
Tue 10 Jul 2018 - 20:29
အင်္ဂလန်နှင့် ကစားမည့် အကြိုဗိုလ်လုပွဲတွင် နှစ်သင်းစလုံး ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက် ရန် အခွင့်အရေးဆတူရှိကြောင်း ခရိုအေးရှားပွဲထွက်တိုက်စစ်မှူးမန်ဇူကစ်က ပြောသည်။
၁၉၆၆ နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်စွဲရန် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ဟု အင်္ဂလန်နောက်ခံလူပြော
လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ဖလား သည် အင်္ဂလန်အတွက် နောက် တစ်ကြိမ်ဗိုလ်စွဲရန် အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်ကြောင်း အင်္ဂ လန်နောက်ခံလူ ကိုင်လီဝေါလ် ကာက ဝန်ခံပြောကြားသည်။
Tue 10 Jul 2018 - 19:55
-ဘာစီလိုနာသည် ဘရာဇီးကလပ် ဂရီမီယိုမှ လူငယ်ကွင်းလယ် လူအာသာမီလိုကို ပေါင် ၂၇ ဒသမ ၅ သန်းဖြင့် အပြီးသတ်ခေါ်ယူ ကြောင်း အတည်ပြုပြီး စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေး ပေါင် သန်း ၃၅၀ နှင့် အတူ ခြောက်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
Tue 10 Jul 2018 - 19:42
ခရိုအေးရှား-အင်္ဂလန် (ည ၁၂ နာရီခွဲ) ငယ်ဂုဏ်ရှိသော အင်္ဂလန်နှင့် သမ္ဘာရင့်ကစားသမားများစုဖွဲ့ထားသော ခရိုအေးရှားတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်သည်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားများ ရာသီစတင်ချိန် ပွဲစဉ်လွဲချော်နိုင်
Tue 10 Jul 2018 - 19:41
သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ ကို ကိုယ်စားပြုကာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပွဲစဉ်များ ကစားနေသောကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားများ အနေဖြင့် ရာသီအစပွဲစဉ်များလွဲချော်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားအကြိုဗိုလ်လုပွဲ ရောက် ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်နှင့် ခရိုအေးရှားတို့အနေ ဖြင့် ဗိုလ်လုပွဲ (သို့မဟုတ်) တတိ ယလုပွဲ ကစားရမည်ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်၁၅ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
စပိန်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း တောရက်စ် ဂျပန်လိဂ်သို့ ပြောင်းရွှေ့
Tue 10 Jul 2018 - 19:40
ပြီးခဲ့သည့်လက အက် သလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှ ထွက် ခွာပြီးနောက် ဂျပန်လိဂ် (ဂျေလိဂ်)ကလပ် ဆာဂန်တိုဆူတို့ အလွတ် ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ကြောင်း စပိန်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဖန်နန်ဒိုတောရက်စ်က ကြေညာ သည်။ ငယ်ဘဝကလပ် အက်သက် တီကိုမက်ဒရစ်တွင် နှစ်ကျော့ ကစားခဲ့သူ တောရက်စ် (၃၄)နှစ် သည် လီဗာပူး၊ ချယ်လ်ဆီးနှင့် အေစီမီလန်၌ ကစားခဲ့ပြီး စပိန် နှင့်အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားတစ်ကြိမ်၊ ယူရိုဖလားနှစ်ကြိမ် ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
ထိုင်းကလေးငယ်များ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲသို့ သွားရောက်ကြည့်ခွင့်ရမည်မဟုတ်
Tue 10 Jul 2018 - 19:38
လိုဏ်ဂူထဲမှ ပြန်လည် ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သော ကလေးရှစ်ဦးသည် အပူချိန်ကျဆင်းပြီး အချို့က အဆုတ်အအေးမိခဲ့သောကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူရသော်လည်း ကျန်းမာရေးအခြေ အနေ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထိုင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇူလိုင် ၁၀ ရက်တွင် ပြောသည်။ ဂူထဲပိတ်မိနေသူ ၁၃ ဦးအ နက် ပထမဆုံးအသုတ်အဖြစ် လေးဦးကို ဇူလိုင် ၈ ရက်က ကယ် ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်လေးဦး ကို ဇူလိုင် ၉ ရက်က ထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကာ ကျန်ငါးဦးကို ကယ် ထုတ်ရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နေသည်။
Mon 09 Jul 2018 - 23:41
အိမ်ရှင်ရုရှားကို ခရိုအေးရှားက အနိုင်ရရှိပြီးနောက် လူမှုမီဒီယာ ပေါ်တွင် ဒိုင်နမိုကိယက်အသင်းဖော်တစ်ဦးနှင့်အတူ ‘‘ယူကရိန်းအ တွက် ဂုဏ်ကျက်သရေ’’ ဟု ပြောကြားသော ခရိုအေးရှားနောက်တန်း လူ ဗီဒါကို ဖီဖာက အရေးမယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ဗီဒါသည် အင်္ဂလန်နှင့်ပွဲတွင် ပါဝင်ကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအဖြစ်အပျက် ပြီးနောက်
Mon 09 Jul 2018 - 23:40
Mon 09 Jul 2018 - 23:39
Mon 09 Jul 2018 - 23:38
စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်က ဘာစီလိုနာနှင့် ရိုးမားအ သင်းနည်းပြဟောင်း လူးဝစ်အင်း နရစ်အား လက်ရွေးစင်အသင်း နည်းပြသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ သည်။ အသက် (၄၈) နှစ်အရွယ် စပိန်ကွင်းလယ် ကစားသမား ဟောင်းသည် ယာယီနည်းပြရာ ထူးမှ နုတ်ထွက်သွားသော ဖာနန်ဒို ဟီယာရိုနေရာကို အစားထိုးဝင် ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
Mon 09 Jul 2018 - 23:37
Mon 09 Jul 2018 - 22:54
Mon 09 Jul 2018 - 22:53
Mon 09 Jul 2018 - 22:51